मार्सि चामलले चर्चा कमाएका दुर्गा प्रसाइले थाले अनुमतिबिनै एमबिबिएस अध्यापन तयारी – ताजा समाचार
मार्सि चामलले चर्चा कमाएका दुर्गा प्रसाइले थाले अनुमतिबिनै एमबिबिएस अध्यापन तयारी
अनुमति नपाउँदै झापाको प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजले एमबिबिएस अध्यापनको तयारी थालेको छ। कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले आगामी मंसिर १ गतेदेखि एमबिबिएस अध्यापन सुरू हुने भन्दै सम्बन्धन नपाउँदै तयारी थालेका हुन्।
एमबिबिएस पढाइ तयारीका लागि भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)को महाराजगञ्जस्थित कलेजका प्रोफेसर डा. रामप्रसाद उप्रेतीलाई प्रिन्सिपल नियुक्त गरेका हुन्। बिएन्डसीको प्रिन्सिपल बन्न उप्रेतीले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको आइओएम स्रोतले जनायो।
‘उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ, सरकारी सेवा छोडेको जनाउनुभएको छ,’ आइओएम स्रोतले भन्यो। उनको राजीनामा प्रक्रियामा भने गएको छैन। क्याम्पसले डिन कार्यालयमा राजीनामा पत्र पठाएको छैन। डिन कार्यालयले त्रिविलाई पठाएपछि मात्र राजीनामाले पूर्णता पाउने छ।
‘उहाँको राजीनामा क्याम्पसबाट डिन कार्यालयमा आइसकेको छैन,’ आइओएम डिन डा. जगदीश अग्रवालले भने। उप्रेती पूर्वमाओवादीनिकट मानिन्छन्। प्रचण्डसँग निकट प्रसाईंको उप्रेतीसँग सुमधुर सम्बन्ध छ।
प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाई ।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रसाईंले आगामी मंसिर १ गतेदेखि एमबिबिएस सुरू गर्न सकिने आधारकै साथ आफूले क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गरेको दाबी गरे।
प्रसाईं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मेडिकल व्यापारी हुन्।
झापाको बिर्तामोडमा रहेको १२ सय शैयाको बिएन्डसी अस्पताल ।